Politika momba ny tsiambaratelo - IntoKildare
Ny lalàna Cookie
Ny lalàna cookie dia mitaky tranokala ahazoana alalana amin'ireo mpitsidika hitahiry na haka izay fampahalalana rehetra amin'ny solosaina na finday. Ny lalàna Cookie dia manampy amin'ny fiarovana ny tsiambaratelo an-tserasera, amin'ny alàlan'ny famelana ny mpanjifa hahafantatra ny fomba fanangonana sy fampiasana an-tserasera ny fampahalalana momba azy ireo. Afaka mifidy ny hamela cookies na tsia ny mpanjifa.
Manaraka ny lalàna Cookie ity tranonkala ity amin'ny alàlan'ny fampisehoana pop up manaitra anao momba ny cookies. Amin'ny alàlan'ny fipihana 'Nahazo izany!' manaiky ny fampiasana cookies ao amin'ity tranonkala ity ianao. Azonao atao ny manova ny fahazoan-dàlana amin'ny cookie amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fanovana ny Browsers Settings. Raha misafidy ny hamono cookies ianao dia mety tsy mandeha tsara ny asan'ny tranonkala sasany.
Fanangonana sy fampiasana vaovao
Ny rafitray dia mandrindra sy mirakitra ny adiresy IP anao, daty sy ora fitsidihana tranokala, ireo pejy notsidihina, karazana mombamomba anao ary ny mombamomba anao. Ity angona ity dia ampiasaina fotsiny handrefesana ny isan'ny mpitsidika ny tranokala ary tsy hampiasaina hamantarana anao.
Ireo mpitsidika dia mety manapa-kevitra ny handefa mailaka amin'ny alàlan'ny tranokala izay mety hampidirina miaraka amin'ny fampahafantarana azy manokana. Ny fampahalalana toy izany dia ampiasaina fotsiny mba hamaliana valiny mety.
Ny mombamomba anao manokana dia angonina ao anaty endrika fifandraisana haingana. Hampiasainay ity fampahalalana ity hamaly ny fangatahanao ary hifandray aminao momba ny serivisinay raha toa ka mihatra izany.
Ny mombamomba ny mpanjifa rehetra toy ny anarana, ny adiresy ary ny fampahalalana amin'ny mailaka dia angonina ho amin'ny fikarakarana ny filaharana ary tsy hamoahana izany amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny antoko fahatelo.
Mifandray amin'ny IntoKildare.ie momba ny Cookies
Ny fitazonana ny tsiambaratelo momba ny mombamomba anao no zava-dehibe indrindra aminay. Raha manana fanontaniana na ahiahy momba ny fomba fiainanao manokana ianao, dia aza misalasala mifandraisa aminay.
Kildare Fáilte, Rihana faha-7, Aras Chill Dara, Devoy Park, Naas, Co Kildare